EyeNkanga 7, 2018 admin
Salesforce iphumelele elilodwa lomenzi wechiza ukuba ayeke imeyile spam ne blockchain
Software giant Salesforce uzuze US wechiza echaza indlela iqonga blockchain-based ingasetyenziswa ukuthintela spam okanye ezinye imeyili angafuneki ezithwaxa abantu kwii. Eli qonga ecetywayo iza kusebenzisa inkqubo lomntu ukuqinisekisa ukuba kokuba uthumele i-email kusemthethweni okanye, apho kuthiwa nokuba sikwazi ukuphepha positives bobuxoki spam izihluzi amava yangoku.
Le patent ichaza: “Le nkqubo kwakhona ukubona ngcono esemthethweni (wayefuna) imiyalezo kwaye ukwahlula ongekho (kucelwe) imiyalezo. zisetyenziswe kakuhle, ukungaguquleki kunye nohlobo bahambisa ezi blockchain inokwenza kube nzima ukuba ulungise ulwazi xa kokuba uzibophelele ukuba blockchain.”
Imigewu kunjani analytics site web ukukhomba exchange crypto
Cryptocurrency exchange Gate.io wahlaselwa imigewu abathatha elisetyenziselwa ngokubanzi analytics web platform le veki. inkampani Ukhuseleko ESET uthe abadlali ezimbi engozini esithandwayo, Ireland-based analytics web site StatCounter, ngenzame sebe Bitcoin evela zingxoxo abathengi. StatCounter isetyenziswa yi websites ngaphezulu kwezigidi ezibini, Ngokutsho kwamanani zalo, yaye inika iinkcukacha-manani ezigidi web hits imihla.
“Kunzima ukubona ukuba zingaphi bitcoins sele ozitshintshele abahlaseli” ESET abaphandi bathi. Emva kokuba aziswe yi ESET malunga ukwaphuka, Gate.io wamemezela ngoLwesithathu ukuba “ngoko nangoko isuswe” inkonzo StatCounter evela kwisiza, baza bamkhumbuza ukuba imali abasebenzisi “ekhuselekileyo.” data CoinMarketCap ibonisa ukuba Gate.io nguye exchange 38th enkulu crypto omhlaba volume yorhwebo oluhlengahlengisiweyo.
abagqatswa Crypto friendly wonyulwa leeRhuluneli of California and Colorado
Isithuba crypto elikorileyo uwina ezimbini ezinkulu kolu lonyulo lwaphakathi enyakeni njengoko abaviwa ezimbini crypto lobuhlobo babe iinkosana California and Colorado. Gavin Newsom (D) won 59% lweevoti & wahlula John Cox (R) ukuba ndibe yirhuluneli California kaThixo. Ke ixhaswa amawele Winklevoss, bebonke banikela $116,800 ku Newsom xa iphulo ukuya kuDisemba 2017.
Jared Polis uthethe Colorado, wining ngu 51.6% nxamnye Republican Walker Stapleton ngubani ilawulwa kuphela 45%. Polis iye nomxhasi enkulu kule ndawo ukusukela ubuncinane 2014. iphepha lakhe mkhankaso icandelo yonke kwi blockchain, apho athi: "Injongo yam kukuba ukuseka Colorado njengengingqi yesizwe ezintsha blockchain kwezoshishino kunye norhulumente. "Zombini leeRhuluneli nokwamkela amalizo Bitcoin.
Blockchain News 31 EyoMqungu 201...
Post Previous:Crypto News 06.11.2018
Post Next:Crypto News 18.11.2018